Soo ogow khiyaanada si aad saxan kasta ugu rogo mid gubta | Bezzia
Soo ogow khiyaamada si aad saxan kasta ugu beddesho mid gubta
Tony Torres | 11/01/2022 20:00 | Cuntada, Nafaqeyn
Si loo lumiyo miisaanka waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro deficit caloric, oo leh gubashada kalooriyada. Midka kale la'aanteed waxba maaha, sababtoo ah miisaanka luminta hab qeexan oo caafimaad leh ayaa soo mara wadarta labadaba. Haddaba sidaas oo kale cunto cunid macnaheedu maaha inaad naftaada gaajoonaysoIsboortiga oo aad sameysid macneheedu maaha in aad is disho si aad u tababarato saacado aan dhammaad lahayn maalin kasta.
Waxa ay tahay inaad ogaato waa in tababarka hufan uu kaa caawinayo inaad gubto baruurta oo aad lumiso miisaanka. Iyo sidoo kale in lagu daro cuntooyinka qaarkood ee cuntadaada, waxay kuu ogolaaneysaa inaad u beddesho saxan kasta oo gubanaya baruurta. Sababtoo ah waxaa jira cuntooyin saameyntan ku leh jirka iyo iyaga ka mid ah waxaan u adeegi doonnaa si aan u gaarno yoolkeenna ah inaan luminno. Ma rabtaa inaad ogaato xulafada kaa caawin doona inaad gaadho hadafyadaada?
1 Sida saxan kasta loogu rogo mid gubta
1.1 Ku dar xidid sinjibiil suxuuntaada
1.2 Salad leh dhaymo khal
1.3 Ku dar prawns cuntadaada baastada
1.4 Ku dar suxuuntaada uunsi gubanaya
Sida saxan kasta loogu rogo mid gubta
Cuntooyinka qaarkood waxay ka kooban yihiin maaddooyin abuura saamaynta thermogenic jirka, taas oo kuu ogolaanaysa inaad gubto dufanka, gaar ahaan aagga caloosha. Walxaha kale waxay sidoo kale kaa caawinayaan inaad lumiso miisaanka, sida kuwa soo dedejiya dheef-shiid kiimikaadka, tusaale ahaan. Maaddooyinkani waxay si dabiici ah ugu jiraan cuntada. Taasi waa, haddii aad si joogto ah ugu darto cuntadaada, waxaad si dhab ah u bedeli kartaa saxan kasta oo gubanaya.
Ku dar xidid sinjibiil suxuuntaada
Asalkii sinjiga Waa wax la yaab leh oo awood leh, maadaama ay sabab u tahay hantideeda badan waxay faa'iido u leedahay caafimaadka. Tani waa mid ka mid ah kuwan cuntooyinka leh saamaynta thermogenic jirka, taas oo macnaheedu yahay in haddii aad ku darto cuntadaada sinjibiil, waxaad si dhakhso ah u gubaysaa dufanka iyo waxtarka badan. Sinjibiishu waxay u shaqaysaa si la mid ah cuntooyinka kale sida basbaaska, taas oo kordhisa heerkulka jidhkaaga oo aad gubto dufanka.
Ku dar sinjibiisha khudaarta sifeeya iyo kiriimyada, waxaadna heli doontaa fursado badan casho caafimaad leh oo aad sidoo kale ku waayi karto baruurta iyada oo aan xitaa ogaan. Waxa kale oo aad ku dari kartaa maaddooyinka kale oo kordhiso saamaynta, sida turmeric ama basbas yar, haddii aad jeceshahay basbaas.
Salad leh dhaymo khal
Khamrigu sidoo kale wuxuu leeyahay saameyn gubasho dufan leh oo awood leh, sidaas darteed waa xulafada ugu fiican dhammaan kuwa u baahan inay lumiyaan miisaan. Walaxdan xoogga badan wuxuu yareeyaa kaydka dufanka, si aad si fudud uga takhalusto. Qaado saladh leh lebbiska khalka maalin kasta, waxaad ku beddelan kartaa saladh cagaaran kuwa kale oo ku salaysan digirta. Waxaad heli doontaa cunto dhammaystiran oo isku beddeshay mid gubta.
Ku dar prawns cuntadaada baastada
Baradhada, oo lagu daray basbas yar, ayaa ah mid aad u xoog badan oo gubanaya avokado kasta, sidoo kale waa macaan. Tani waa sababtoo ah borotiinada shrimp oo ay weheliso saamaynta thermogenic ee basbaaska, Samee saameyn gubasho dufan leh oo aad u xoog badan. Haddii aad sidoo kale ku darto daadinta liin, waxaad hagaajin doontaa shaqada beerka.
Ku dar suxuuntaada uunsi gubanaya
Xawaashyo badan ayaa leh saameyn thermogenic ah, taas oo ah, waxay kordhiyaan heerkulka jirka waxayna caawiyaan gubashada baruurta gudaha. Intaa waxaa dheer, dhir udgoon ayaa kuu ogolaanaya inaad ku raaxaysato suxuunta leh dhadhan badan adigoon ku darin kalooriyo, sidoo kale waxay yareysaa isticmaalka sodium. Qaar ka mid ah xawaashyada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira waa curry, iniin khardal ah, dhir, ama cayenne.
Barashada isku dhafka cuntooyinka ayaa fure u ah inaad awood u yeelatid inaad wax walba u cunto si caafimaad leh, halka aad miisaankaaga dhimi karto. Sababtoo ah maaha wax ku saabsan gaajo, laakiin ku saabsan barashada cuntada, si aad naftaada ugu quudiso nafaqooyinka lagama maarmaanka ah si uu jirku si fiican ugu shaqeeyo. Ku raaxayso cuntada, dhadhanka iyo macaanka dhulka, sababtoo ah cuntooyinka ugu qanisan ayaa iyaguna ah kuwa ugu dabiiciga ah.
Tabahaan si aad suxuuntaada ugu beddelaan kuwa dufanka shida, waxaad si fudud u dhimi kartaa miisaanka. Samee qaar ka mid ah isboortiga si joogto ah si kor loogu qaado luminta baruurta iyo wixii la mid ah. waxaad kor u qaadi doontaa faa'iidooyinka isbahaysigan gubanaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Cuntada » Soo ogow khiyaamada si aad saxan kasta ugu beddesho mid gubta
Erotophobia ama cabsida galmo lala yeesho lammaane
Jimicsiyada lagu sameeyo miisaanka canqowga